Akụkọ - Nkwado ala na ihe nfụkasị
Tanrimine Metal Nkwado Co., Ltd.
Nkwado email jimwang@cnort.com
Nkwado oku +86 13315128577
Akụrụngwa Kpọtụrụ Utility
Ihe mkpuchi eriri
Ntupu pụrụ iche achọrọ
Ngwa & Consumables
Nkwado ala na ihe nfụkasị
Azụlitela ụdị ọhụrụ nke simenti a na-agbachasị agbachasị na ciment nwere ihe mgbakwunye pụrụ iche iji mee ka ike nke ihe ahụ mee ngwa ngwa na Europe.
A maara dị ka “shotcrete” ọ hụla ngwa na -abawanye dị ka ụzọ nkwado ala maka olulu ala na Europe na North America.
Ojiji ya n'ime ogbunigwe n'ime ala abụwo nke nnwale. Achọpụtara na enwere ike iji ya dochie anya ụzọ ndị ọzọ nke nkwado ala n'okpuru ọnọdụ ala dị n'okpuru ala mana na n'okpuru ọnọdụ ọjọọ, dị ka talc schist na ọnọdụ mmiri dị oke mmiri, ọ gaghị ekwe omume itinye ya n'ọrụ nke ọma.
A na -atụ anya na iji ogbunigwe dị ka ụzọ nkwado ala n'ime ogbunigwe dị n'okpuru ala ga -abawanye. A na -amalite ciment a na -etefasị na ụdị ihe mgbakwunye plastik nke nwere ike nwekwuo ohere itinye ngwa ya. Ihe a fesara agbasasị nke jikọtara eriri igwe na -achọta ngwa sara mbara n'ime olulu ala.
Ngwa nke Shotcrete
Enwere ụzọ abụọ nke ịgwakọta ụyọkọ ụyọkọ, nke bụ mmiri-ngwakọta na ngwakọta akọrọ na-agụnye ịgwakọta ihe niile nwere ihe na mmiri na ịgbapụta ngwakọta ahụ siri ike site na eriri nnyefe na oghere, ebe agbakwunyere ikuku ọzọ na ihe na -efesa n'elu isiokwu. Usoro akọrọ-xix na-enye ohere iwebata ngwa ngwa nke ndị na-eme ngwa ngwa n'ozuzu ngwakọta nke mmiri nwere ike ịgbari, si otú a na-eme ka usoro ịgba mmiri dị ngwa. Emebela ihe ngwa ngwa nke na -eme ka simenti ahụ nwee ike ịrapara n'elu okwute wee tinye n'okpuru oke mmiri.
Enwebeghị igwe igwe na-agwakọta mmiri ruo n'ọkwa ebe ha nwere ike ijikwa mkpokọta buru ibu karịa 3/4 n'ime. A na-ejikarị ụdị igwe ndị a eme ihe maka imezi ala n'okpuru ala kama ịkwado maka ala dara ogbenye. Igwe nke ụdị a bụ ezigbo Gun-All Model H, nke ụlọ ọrụ akụrụngwa na-egwupụta akụ na-ekesa, nke a na-ejikarị eme ihe maka ngwa dị n'okpuru ala ebe mkpuchi mkpuchi siri ike ruru ihe dị ka 2in. buru ibu ma nwee mkpokọta ihe dị ka 1/2 inch chọrọ oke nha maka ọnọdụ akọrọ.
Ọrụ Nkwado nke Obere Ụzọ
Enwere ike iji Shotcrete ma ọ bụ nkwado ma ọ bụ nkwado. Ndị na -adịghị ike na okwute plastik na ala na -enweghị njikọ na -achọ ka arụpụta ihe siri ike, nke ruru eru iji gbochie ala ịtọpụ na -asọba n'ime oghere. Enwere ike nweta nke a site n'itinye sentimita anọ ma ọ bụ karịa nke shotcrete.
N'ime okwute ndị tozuru oke, enwere ike iji ya na nkwonkwo na mgbaji iji gbochie mmegharị obere okwute na -ebute nrụgide na ọdịda. A na -etinye ihe a na -akpọ shotcrete 2 ruo 4 n'ime oke na oke okwute siri ike iji mejupụta mgbawa na oghere iji mepụta elu fọrọ nke nta ka ọ dị larịị na iwepu nsonaazụ notch, naanị ngwa dị mkpa ka achọrọ na mbara dị larịị. N'ọnọdụ a, matriks ahụ nwere njikọ chiri anya na -arụ ọrụ dị ka gluu iji jide mkpịsị ugodi na wedges na -akwado nnukwu okwute na n'ikpeazụ oghere. Ụdị ngwa a bụ ihe a na -ahụkarị na Sweden, ebe imebe nkwado ọwara dabere na shotcrete bụ ihe ama ama n'ihi ịdị irè ya na ọnụ ala ya.
A pụkwara iji kọketị n'ụdị mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi iji kpuchido elu okwute ndị dịpụrụ adịpụ na mbuso agha na mbibi ikuku na mmiri. N'ime ụdị a, ọ bụ memebrane na -agbanwe agbanwe na -aga n'ihu nke nrụgide ikuku nwere ike rụọ dịka nkwado.
Nkọwa nke Gunite na Shotcrete
Ihe na-adịchaghị mgbagwoju anya na-adị iche site na ngwakọta agwakọta na itinye egbe na na shotcrete bụ ezigbo ihe nwere okwute (ruo 1.25 na) okwute na mkpokọta ya, ebe gunite na-abụkarị ngwa agha ciment. Okirikiri ogbugbu dị iche na ngwa na arụ ọrụ n'ụzọ ndị a:
1) Gunite na -achọkarị ikpuchi oke okwute, mana shotcrete ma ọ bụrụ na etinyere ya ozugbo ọgbụgba ọkụ ga -enye ma akara na nkwado iji mee ka elu okwute ọhụrụ sie ike. A na-eche na njikọta rockcrete-rock siri ike bụ n'ihi omume nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke na-anaghị ekwe ka ihe kpụọ si n'oké nkume na-enwe mmetụta peening nke nnukwu mkpokọta na ụmụ irighiri ihe dị mma na nhazi nke igwe mkpirisi mkpirisi eji.
2) Shocrete na -eji mkpokọta buru ibu (ihe ruru 1.25 na) nke nwere ike jikọta ya na ciment na ájá na ọdịnaya mmiri ya dị n'ime ya na -enweghị nkụcha dị oke ọnụ nke a na -achọkarị na egbe. A pụkwara itinye ya n'ọrụ n'ịdị arọ nke ruru 6 n'ime. N'ihi ya, ngwa ngwa ngwa ngwa na -aghọ nkwado siri ike yana onye na -akwagide ala na -emeghe.
3. Ọ naghị egbochi mmiri ma nwee ike mmalite dị elu (ihe dị ka 200 psi n'ime otu elekere), n'ihi na ọ bụghị naanị maka mgbakwunye kamakwa ruo ogo nke mkpakọ nwetara site na ọsọ ọsọ nke 250-500ft. kwa nkeji. na oke mmiri/ciment (ihe dị ka 0.35). Shotcrete, yana ihe mgbakwunye pụrụ iche, nwere ike gbanwee okwute nke obere ike ka ọ bụrụ nke siri ike, na adịghị ike ka okwute plastik a fesasịrị na ya nwere ike na -akwụsi ike na naanị sentimita ole na ole nke nkwado shotcrete. N'ihi njirimara ya na -amị amị, shotcrete nwere ike ịkwagide nrụrụ dị ukwuu n'ime ọnwa ma ọ bụ afọ na -enweghị ọdịda site na ịgbawa.
Oge ezipụ: Jul-02-2021
Okporo ụzọ Dongtai, mpaghara mmepe akụ na ụba na teknụzụ, obodo Huanghua, Hebei, China
Ngwa nke ụzọ dị iche iche na -agwakọta miri maka Excava ...
Sistemụ Nkwado Ala Mmezi